Ụbọchị My Pet » Top 6 Mere Nri bụ Hot maka Romance
"The ụzọ a obi madu site ya afo."
Dị ka a onwe-ha sị foodie, M nwere ike nyekwa ọtụtụ ihe mere, ma ebe a bụ n'elu 6 ihe nri bụ "na-ekpo ọkụ,"Karịsịa na taa mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na mating idaha.
1. Nri na-enye ndị zuru okè "Ntụziaka" maka romance.
Dị ka ọtụtụ ndị inyom, M ụtọ a na-wined na-eri nri n'otu ụlọ oriri na ọṅụṅụ fancy site nwoke ịchọ ịlụ gị ịbịa dị ka akụkụ nke kwere onwe ha nkwa usoro. Ma, dị ka mmekọrịta ha webata, e nwere ihe dị nnọọ "na-akpachi anya" banyere a home esie nri na-akọrọ na nzuzo nke ihe mmadụ ji home— na ọkụ kandụl, a obere music, ite-egwú na ikike ka ntutu gị ala dị ka ọnọdụ na-achọ. Pịa creme na onye ọ bụla?
2. Isi nri n'ụlọ bụ mgbe mma karịa ụlọ oriri na ọṅụṅụ na-eri.
Mgbe na-eri si, ọtụtụ ugboro oriri na-esichara, eje ozi na ndị ọgaranya na fattening sauces, e ghere eghe na ngafe abụba, "Super sized" na-enweghị kwesịrị ekwesị nkwadebe maka ndị na dietary mgbochi na nri allergies. Na-eri nri ya pụrụ ịdị ọnụ n'ọtụtụ ụzọ ndị ọzọ otu.
3. Culinary nkà tinye nwanyị ọ bụla ma ọ bụ onye ihunanya malitegharịa.
Eche banyere ya dị ịba ụba gị "Blue Book" bara uru nke mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ahịa.
Ebe a bụ ihe a nwoke onye so dee nso nso dere: "Ọnụ ọgụgụ ndị inyom ụbọchị ndị a na n'ihu ọha-ekweta na ha nwere ike ghara esi nri bụ ihe ịtụnanya. Mgbe a nwaanyị-ekwu na ọ pụghị esi nri, akpa echiche na-abịakwute a otutu ezi ikom uche bụ "Olee ndị hell otú i elekọta onwe gị na otú ị ga-enwe ike elekọta m?"
4. Nri-enye gị ohere ka ndị ọzọ nọọrọ onwe ha na ndị ọzọ ghọtara dị ka a nwaanyị.
Ọ dịghị ihe ọzọ na-echere gị na mama idozi ọkacha mmasị gị nri, ma ọ bụ na-enwe olileanya na obi gị ụlọ oriri na ọṅụṅụ ga nwere ya na Monday si menu, ma ọ bụ ịkpọ oku maka apụ apụ; ị nwere ike idozi ya onwe gị!
5. Nri odụri niile uche ziri ezi.
Site obi ụtọ aromas, nke anya-adọrọ mmasị ndokwa na efere, na a dịgasị iche iche nke na agba na textures, ka eluigwe uto— eri ezigbo nri pụrụ imeju ndị anyị na-elekọta on ọtụtụ etoju.
6. Nri bụ a fun ụzọ ha dị ná mma.
Ị nwere ike esi nri na o nwere ike ime ka ndị salad. Eri nri ọ bụla ọzọ, ma ọ bụ ikekwe òkè akụkọ na ọdịnala ndị metụtara ezinụlọ Ezi ntụziaka. Nri na-eme ka a nwoke na-eche pampered na catered ka. Ma ọ bụrụ na ọ bụ pụrụ iche gị, adịghị ka otú unu ga-amasị ya na-eche?
Na e nwere ozi ọma n'ebe a: Ị na-adịghị edebanye maka culinary akwụkwọ ma ọ bụ erubere di gi adịghị agwụ agwụ nnwale; e nwere ọtụtụ online nri saịtị na-enye nzọụkwụ-site-nzọụkwụ Nkuzi dịkwuo gị nri I.Q.!
Ọzọ bara uru atụmatụ bụ ịzụta cookbooks dere maka ụmụaka. Ha na-enye a oké amalite na-amụ banyere kichin nchekwa, ọkọlọtọ nha, na mfe iso Ezi ntụziaka.
Cheta, nri na-a oké ụzọ-atụle "ekpo ọkụ" na-akpali agụụ iri ihe nke taa nwoke!